Chikumi 23, 2011 pa 1:06 pm
Ndinovimba kuti rakatevera kusunungurwa kuti parser.php zvokusarudza vachava configurable vari plugin muzviruva saka hatifaniri kuti Redo kwavari apo upgrading. Vaya vari makuru mikana!
Chikumi 23, 2011 pa 10:53 pm
Kwete zvose zvichava configurable, sezvo tisingadi kutsvaka kwakakurira mukomana aishandisa pamwe vakawandisa mikana, wo – panguva iyi pfungwa ichi zvinoramba ichi chinoratidza kuti dzimwe yepamusoro vanoshandisa izvo zvichida kunzwisisa zviri nani chii kutarisira uye kana kutarisira, ini ndisinganzwi zviri akura zvokukwanisa kuva chikamu chikuru chinoumba, kanenge kwete nguva yokuva.
ngaavongwe nokuti mhinduro kunyange
Chikumi 24, 2011 pa 8:00 ndiri
Ndinogona kunzwisisa kuti nezvechisarudzo rirege yakura zvakakwana kuwedzera configuration (kunyange MUCHINGOGARA munhu anoona configuration iwayo Software kuti inosimbiswa sezvo “Beta” kana “experimental”, nezvimwewo. – saka hapana muenzaniso – Kunyange Transposh kare) Kuti kwete kuda “richandifukidza” inodzidzisa, nomwoyo kuremekedza, Handisi kutenga kuti nharo dziri Software configuration. Saizvozvo, Ini handigoni kutaura kuti ndakawana Transposh kuti kusarudza sezvavari 100% pachena. Izvi hazvirevi kundinetsa. Ini chete kupedza nguva apiwa kuverenga kusvikira Ndinonzwisisa. Ndinoziva kuti pane akakurumbira pfungwa iri Software zvikuru chaunofanira “vanorichengeta nyore”, asi Kuchinja basa anoenda ruoko-mu-maoko zvakaoma kunzwisisa. Ndicho nyore kutengeserana-kure mune zvemichina. Translation kugadzira kwagara kunzwisisa. Zviri nani kuti kuedza kutarisira kunzwisisa uye ronga / kutsanangura nzira nepaunogona napo, kupfuura “ndivanzei” kwavari.
zvakajeka, Ndinofara chaizvo vaya kusarudza uye kana vanhu vanobatanidzwa mushanduro nguva dzose achishandisa Transposh nzira tiri, Ndingadai kudziwana zvinokosha kuti basa uye Transposh zvakaoma kushandisa pasina kwavari. Wadii kuvhura navo vanhu vakawanda?
Kwete kuedza kuva negakava pano, asi “vanorichengeta nyore” mumwe wangu inopisa mabhatani. Sorry waguma naro! 😉
Chikumi 24, 2011 pa 5:59 pm
sei kuwedzera SITEMAP vari Mod ichi?
Chikumi 24, 2011 pa 7:55 pm
Chikumi 25, 2011 pa 12:01 pm
nama ichi regai kushandira ini. Pandaiva Upload SITEMAP-core.php uye tinya kuvakazve SITEMAP “XML Sitemap jenareta” anoti:
# Wokupedzisira run haana kupedza! Pamwe unogona kumutsa kuyeuka kana nguva rinogumira PHP kunyorwa. Dzidza zvimwe
# Vokupedzisira anozivikanwa kuyeuka kushandiswa pamusoro manyorero rakanga 36MB, Pamuganhu Server wenyu 256M.
# Yokupedzisira ichaziva kuurayiwa nguva manyorero rakanga 133.07 masekondi, Pamuganhu Server wako 120 masekondi.
# The chinyorwa akamira kumativi romukova nhamba 1716 (+/- 100)
Chikumi 25, 2011 pa 12:09 pm
Ndinogona chete pfungwa kana kukwidza nguva muganhu kuti manyorero kana kutamira shanduro 4 kuti plugin
Chikumi 30, 2011 pa 12:50 pm
Chikumi 30, 2011 pa 11:57 pm
ngaavongwe nokuda kugoverana ichi, there should probably be a better interface to that coming in some future version 🙂
Bharat Balegere anoti
Chikunguru 4, 2011 pa 4:07 ndiri
Ko transposh kunoenderana Hypercache?
Ini vanosarudza kushandisa Hypercache pamusoro Super cache.
Hypercache anezvakawanda zvaungasarudza nokuti munoparadza cache.But handizivi sei kurishandisa transposh.
Chikunguru 4, 2011 pa 1:12 pm
Handina kuedzwe ichi, asi ndinofunga kuti kushanda, kushaya invalidation zvingaita kuti vamwe reposting nyaya shanduro, asi edza kunze, mileage wako achizosiyana
Little Red Frog anoti
Chikunguru 11, 2011 pa 11:45 ndiri
Ndinoda 2 mibvunzo…
1) Ndinoda dzimwe nguva kunyora dzemikova yangu muna Chirungu, uye ipapo kushandura muvira French, uye dzimwe nguva muchiFrench obva kushandura muvira Chirungu. Zvinoita uye sei?
2) Ndinoda kuva mumwe chete kukwanisa kushandura dzemikova yangu uye uchida tsanangudzo kwete kuonekwa pamusoro pamapeji paIndaneti. pano zvakare, zvinobvira, uye sei?
Chikunguru 12, 2011 pa 11:46 pm
1. Unofanira kushandisa tp_language Meta mune mapikicha
2. Just kuisa shanduro mvumo kuti Admin, naro achaonekwa pamusoro wako paIndaneti mapeji asi kwete vanoshandisa zvenyu
Chikunguru 14, 2011 pa 10:15 ndiri
Ndakamukumbira imi kakawanda, asi havana kuwana chero gwa. Even, iwe gumbo mashoko angu ose.
Ini ndakagadza ari plugin, config uye wedzera Widget nokubudirira. zvisinei, kana ini tinya kumutauro chaicho, ine kukanganisa:
The peji uchiedza kuona hazvigoni kuratidzwa nokuti anoshandisa arwara kana unsupported chimiro compression.”
Unogona kuona nzvimbo yangu, uye ndapota ndizive yenyu mhinduro.
Chikunguru 19, 2011 pa 2:09 ndiri
Ndinoedza tumira imi kakawanda kudaro, Ndapota zvinopa kushanda kero ye email mutsanangudzo kana uchida kuwana mhinduro kubva nguva nenguva, Ndingadai vanotiwo vachiongorora kwako spam forodha tigutsikane nguva nenguva kana uri kumirira chinhu kukosha, zvisinei – iwe zvanyanyisa mhinduro pano, Gzip nyaya, zvimwe ane matambudziko marongero yako nzvimbo kana dzinopesana plugin
Chikunguru 18, 2011 pa 5:06 pm
Nokuti ini raiva dambudziko pamwe plugin “Gzip compression”. Edza chokukuvadza kuti aone kana anogadziriswa dambudziko
Chikunguru 23, 2011 pa 7:19 pm
Ndinokutendai nokuti Transposh uye Ilyo kuti gwa!
Handizivi kana ini dzinoita Gzip compression, pamwe zviri chikamu netori Super cache kana W3 zvachose cache ? Saka zvino, ndingatevedzera chokukuvadza naro? Please kubatsira!
mumwe mubvunzo, Handina akagadzawo plugin ichi mumwe nzvimbo, Chave zvakanaka pamberi. zvisinei, kubva zuro, rave richiwanika peji amboita apo ini tinya kumutauro chaicho. Saka chii chiri kunetsa?
Please ndibatsirei! Maita vakomana vose chaizvo!
Chikunguru 28, 2011 pa 10:38 ndiri
Havagoni kukubatsira zvikuru pamwe maererano kuti Gzip, ichi ane chinhu chokuita ane dzisingawirirani configuration izvo isu havazivi.
Mapeji amboita anofanira kugadziriswa kuburikidza kuwedzera PHP kuyeuka muganhu.
Chikunguru 28, 2011 pa 9:50 ndiri
Apo tinoita kuwana update nokuda 3.2.1?
Ndinofarira wako Translation-Plugin uye uchida kuisa kuti wangu Newest WP-Version
Chikunguru 28, 2011 pa 10:32 ndiri
tsime, zvinoshanda pamwe 3.2.1. Nzvimbo iri kumhanya 3.2.1, ndinofunga achachinja readme.txt nokukurumidza zvakakwana.
Chikunguru 29, 2011 pa 1:47 pm
OK… damn.. pamwe dingindira wangu (mondeo – kubva rukodzi-dingindira) ari doesn't kushanda .Only ari backend vachabviswa zvachose kushandurwa, but in frontend it doesn´t work 🙁
Chikunguru 29, 2011 pa 1:53 pm
OK, shure zvose… zvino ndine naro hinbekommen.
Sorry nokuti kaviri romukova…
Chikunguru 29, 2011 pa 3:50 pm
Akafara kunzwa zvose zvakanaka zvino